Excelkpụrụ Excel maka ịhazi usoro mmelite mmekọrịta site na ụbọchị izu | Martech Zone
Otu n'ime ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ nwere oge anaghị agbanwe agbanwe oge ha na-azụ ahịa. N'ihi nke a, anyị na-achọ ịtọlite ​​mmelite mgbasa ozi mmekọrịta tupu oge eruo ka ha wee ghara ichegbu onwe ha banyere ịkụ ụbọchị na oge ndị a kapịrị ọnụ.
Imirikiti usoro ntanetị mgbasa ozi na-enye nnukwu bulite ikike iji dozie kalenda mgbasa ozi gị. Ebe ọ bụ na Agorapulse bụ onye nkwado nke Martech ZoneM ga-ejegharị gị site na usoro ha. Dịka nchọpụta, ha na-enyekwa obere mgbanwe mgbe ị na-ebufe faịlụ dịpụrụ adịpụ (CSV) n'ihi na ị nwere ike ịdepụta ogidi nke faịlụ gị karịa ịnwe ha koodu nzuzo.
Mgbe anyị na-ewu CSV faịlụ, anyị achọghị ka slam a tweet 7 ụbọchị n'izu n'otu oge ahụ. Anyị chọrọ ịtọ CSV na ụbọchị izu ọ bụla na ụfọdụ oge anaghị aga kwa ụtụtụ. N'ihe atụ a, aga m ejupụta mpempe akwụkwọ na ntanetị mgbasa ozi maka ụtụtụ Mọnde, Wednesde, na Fraịde.
Excelkpụrụ Excel maka Daygụzi ofbọchị Izu
Gbalia ibido na Excel Spreadsheet, obughi faili CSV, ebe anyi gha eji Excelkpụrụ Excel wee bupụ faịlụ ahụ na usoro CSV. Ogidi m dị mfe: Ụbọchị, Text, na URL. Na cell A2, usoro m si achọta Mọnde mbụ ma taa. Aga m etinye oge n’oge elekere asatọ nke ụtụtụ.
Usoro a na-abanye n’izu ọzọ wee chọta Mọnde n’izu. Na sel A3, achọrọ m ịtinye ụbọchị abụọ na ụbọchị dị na A2 iji nweta ụbọchị Wednesde.
Ugbu a, na cell A4, aga m agbakwunye ụbọchị 4 ka m wee nweta ụbọchị maka Fraịde:
Anyị emebeghị. Na Excel, anyị nwere ike ịdọrọ usoro mkpụrụ ndụ na-akpaghị aka maka Excel ka ọ gbakọọ usoro dị na ahịrị ndị ọzọ. Usoro 3 anyị ọzọ ga-agbakwunye otu izu na mpaghara anyị gbakọtara n'elu. A5, A6, A7, A8, A9, na A10 bu kwa ndi a:
Ugbu a, ị nwere ike ịdọrọ usoro maka ọtụtụ mmelite dịka ịchọrọ ịbubata.
Oge Random na Excel
Ugbu a anyị enwetala ụbọchị niile, anyị nwere ike ọ gaghị achọ ibipụta n’oge ahụ. Ya mere, aga m etinye kọlụm na-esote kọlụm A na na kọlụm B, m ga-agbakwunye ọnụ ọgụgụ ụlọ na nkeji na oge na kọlụm A, ma agaghị agafe ehihie:
Ugbu a, dọrọ usoro ahụ na B2:
N'ebe ahụ anyị na-aga! Ugbu a, anyị nwere kọlụm nke Mọnde, Wenesde, na Fraịde na-enweghị oge dị n'etiti elekere asatọ nke ụtụtụ na etiti ehihie. Jide n'aka na ịchekwaa Excel Spreadsheet gị (AS Excel) ugbu a. Anyị nwere ike ịlaghachi na mpempe akwụkwọ a kwa nkeji ọ bụla ma ọ bụ afọ ọ bụla ka anyị na-ahazi mmelite mmekọrịta ndị ọzọ.
Iomi Valkpụrụ na Excel
họrọ Dezie> Detuo site na Excel menu ma mepee mpempe akwụkwọ Excel ọhụrụ - nke a ga-abụ mpempe akwụkwọ ọrụ anyị na-ebupụ na CSV. Edochila kọlụm ahụ, n'agbanyeghị. Ọ bụrụ na ịmee, a ga-edepụta usoro ndị ahụ ma ọ bụghị ezigbo ụkpụrụ. Na oru ohuru ohuru, Họrọ Dezie> Tapawa Ọpụrụiche:
Nke a na-enye a dialog window ebe ị nwere ike họrọ ụkpụrụ:
O tinyere ya na akara na akara iri? Enweghị nchekasị - naanị ị ga-edezi kọlụm ahụ dị ka ụbọchị na oge.
Ma ugbu a ị nwetala data ịchọrọ! Nwere ike ugbu a mejupụta mmekọrịta mmekọrịta yana tinye mgbakwunye njikọ. Nyagharịa ka Faịlụ> Chekwa Ka ma họrọ Kpụrụ Dịpụrụ iche nke Comma (.csv) dika nke gi File Format. Nke ahụ ga-abụ nnukwu bulite faịlụ i nwere ike mbubata gị na-elekọta mmadụ media ebipụta usoro.
Ọ bụrụ na ị na-eji Agorapulse, I nwere ike iji ha Bulk bulite atụmatụ iji bulite ma hazie oge mmekọrịta gị
Etu ị ga - esi bulite mmelite mmekọrịta na Agorapulse
Ngosipụta: Abụ m onye Agorapulse Onye nnochite anya.
Tags: agorapulsennukwu buliteexcelExcel gbakọọ ụbọchịusoro kachasị mmarandom oge Excelusoro ihe omume tweet
GTranslate: Otu Mfe Ntughari Ntughari WordPress Iji Google Translate
Nov 15, 2020 na 2:01 PM
Daalụ maka nnukwu ndụmọdụ! Site na usoro ịhazi usoro niile n'ebe ahụ, agaghị m eche n'echiche iji naanị Excel.